Isudi emhlophe yomkhwenyana | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | 05/06/2021 22:47 | imfashini, Amathrendi
Siza esikhathini somshado esikhipha injabulo, ukuzibophezela nenjabulo. Kuwo wonke lawo madoda adinga isudi yomkhwenyana ngomshado wawo, nakhu esinakho ukukhethwa kwesudi 'yomkhwenyana omhlophe' ehlukile. Ngoba hhayi omakoti kuphela abagqoka ezimhlophe futhi uma umkhwenyana ethatha isinqumo sokugqoka nalo mbala unelungelo lokugqama ngaphezu kwakho konke okunye.
Futhi, lo mbala prima njengenketho engcono kakhulu ehlobo nangezikhathi ezinokushisa okukhulu. Kulezi zinsuku, izinqubo kanye namasiko amahle wokugqoka emishadweni akusenamandla, kanti imakethe isivele igcwele izinhlobo ezingavamile ngoba abantu bayazifuna.
Isudi yomkhwenyana emhlophe ikhazimula ngobuhle kunoma yimuphi umshado. Kepha kuvame ukusetshenziswa ikakhulukazi emishadweni eyenziwa ngemicikilisho ekhethekile, hhayi emishadweni ehlelekile, lapho umshado ugujwa olwandle noma owesilisa ofuna umshado wesibili.
1 Ungayikhetha kanjani isudi emhlophe yomkhwenyana?
2 Ama-plugin avunyelwe
3 Izinkinobho zokuhlanganisa eminye imibala
Ungayikhetha kanjani isudi emhlophe yomkhwenyana?
Isudi emhlophe yomkhwenyana kufanele ikhethwe ngokuhlakanipha, enokusikwa okuhle, indwangu enhle, lapho Kusho ukuthi kukhona ukunambitheka nobucukubhede obenziwa. Imvunulo izohambisana nohlobo lomcimbi nendawo.
Ukugqoka isudi emhlophe ungagqoka yonke ingubo yakho ngaphandle komunye umbala, awudingi noma isiphi isesekeli esivelele ngaphezu kwesudi uqobo. Uma zonke izesekeli zimhlophe ngeke zenze isitayela esiyisidina, okuphambene nalokho, izikhulu kakhulu nokusha kwenziwa. Yize ungabalekela ingqikithi yeklasikhi futhi ugqoke izesekeli ngokuya ngombala ongahamba ngokumangalisayo.
Amasudi kamkhwenyana ngokushuna ajwayelekile emishadweni egujwa eduze nogu, ezindaweni ezingasolwandle, emaphandleni, engadini ... Kodwa-ke, uma umshado ugujwa endlini ungahle uhambisane nohlobo oluthile itimu yothando, okuthile okubhejayo nokubheja ku-classicism. Yingakho amasudi amhlophe ezimhlophe elungile, enemisila nemisila. ngokubukeka kokuvuna. Siyabona ukuthi iningi lala masudi seliphelile ngokufekethiswa ukuze likwazi ukubukisa ngengubo kamakoti.
Imibala emihle kakhulu yokuhlanganisa i-pastel shades. Imibala yezinkanyezi amathoni omhlaba, ama-lilac athulisiwe, ama-pink akhanyayo, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, imifino elula kakhulu ... onsundu omnyama noma i-burgundy ayivunyelwe imibala, kwenzeka okufanayo ngemibala egqamile. Umbala omnyama kuphela kuzovunyelwa othayi noma othayi.
Izicathulo zingaba mhlophe, Kepha uma ufuna ukuthi zihlangane nanoma yisiphi isesekeli, ungasebenzisa ama-brown brown, noju, amathoni anqunu noma ama-caramel. Ngokunye okusele ungagqoka isudi emhlophe yomkhwenyana ungayidluliUthayi noma uthayi womnsalo kuphela ubuzokwanela. Engxenyeni ephaketheni yejakhethi ungangeza iduku noma imininingwane emincane yezimbali lokho kuzohambisana nezimbali zikamakoti.
Izinkinobho zokuhlanganisa eminye imibala
Akulula ukuthola inhlanganisela futhi siyazi ukuthi umhlophe kusenguye ohlanganisa okuhle kakhulu. Okuhamba phambili ngukuthi thola ukuvumelana okuhle nezinye izingubo esingakwazi ukuyithola emakethe. Amanye amajakethi asevele engene ngaphakathi lapels umbala omnyama. Kuzo zombili izibonelo zesithombe ungabona i- inhlanganisela yamabhulukwe amnyama anejakhethi emhlophe. Eminye imininingwane elingana kahle nguthayi omnyama womnsalo, ihembe elimhlophe nezinkinobho ezimnyama.
Uma ufuna ukubheja ngesudi emhlophe, kepha ngaphandle kokuthi kube yithagethi yenuzi, kukhona futhi isudi emhlophe qhwa. Kungumthunzi omhlophe osondele kumbala ompunga okhanyayo futhi ovuma izinto eziningi ezahlukahlukene ezinamathoni nemibala ehlukahlukene. I-Navy blue ihlangana kahle nalo mbala Futhi ingasetshenziswa zombili othayi nasezikweleni zamaphakethe. Amahembe angasetshenziswa ngamathoni we-pastel, lapho okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo nakho kungathatha isigaba esiphakathi.
Isudi beige nayo ishaye kahle ukuze ungagqoki lowo mhlophe ocwebile. Izesekeli ezinamathoni aluhlaza kanye nezinye izinhlobo ze imibala hlangothi futhi elula. Kungagqanyiswa ngethoni ehluke ngombala futhi imnyama, kepha ngaphandle kwehaba, ngaphandle kwalokho, konke amathoni we-beige yizinhlanganisela ezinhle kakhulu, emhlophe qwa. Izicathulo ezingaphelela kahle yilezo isikhumba esinsundu.
Kukhona osaziwayo ababuye bagqoke amasudi amhlopheusuku lwakho lomshado. Sinesibonelo sikaDavid Beckham ngenkathi eshada noVictoria Beckham. Umlingisi uWill Smith naye ukhethe isudi emhlophe, imodeli yaseSpain uJavier de Miguel ngenkathi eshada noMiriam Pérez. Noma uSolange Knowles, udadewabo kaBeyoncé ngenkathi eshada nomlingani wakhe u-Alan Ferguson.
Uma uthanda ukubona futhi uphefumulelwe, ungathola ngokusebenzisa amamodeli angenakubalwa we-inthanethi athengiswayo. Aze abheke phezulu abuke osaziwayo abaningi abanikeze u 'yebo ngifuna' ngosuku lwakhe lomshado, egqoke isudi emhlophe ekhuthazayo nenhle. Uma ufuna ukubona ukubukeka okukhuthazayo nangamanye ama-shades ungafaka isigaba sethu se- «Amasudi amnyama omkhwenyana» noma «ugqoka kanjani emshadweni wosuku ».
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Isudi emhlophe yomkhwenyana